[Tribune] Wax ka badan Qodobka 102, Aljeeriya waxay ubaahan tahay Golaha Degaannada - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA [Tribune] In ka badan Madadda 102, Aljeeriya waxay u baahan tahay Golaha Degaannada - JeuneAfrique.com
"Algeria oo lacag la'aan ah oo dimuquraadi ah, dadku waxay doonayaan inay dhacaan xukunka! Laga soo bilaabo bishii Febraayo ee kun oo Algerian ah. Haddii ay ku guuleysteen inay helaan ka tegista madaxweynihii hore, ee xafiiska muddo labaatan sano ahmaanta, waa inay go'aan ka gaaraan su'aasha geeska ah ee kala-guurka. Miyay tahay inaan raacno diin diin ah, oo aan ku hayno heerarka dhismaha dhisme oo si furan u diiday dadka? Ama waa inaan qabannaa fursaddan si aan u dajinno aasaaska wada-xaajoodka cusub ee bulshada, dastuur cusub oo soo bandhigi doona dulmiga Algeria berri?
>>> READ - Is-casilaadda Bouteflika: Marxaladda ku-meel-gaadhka ahi waxay ku xiran tahay warqadda ama ruuxa Dastuurka?
Hadday Aljeeriya u noqoto mid dalbanaysa ka bixitaanka "nidaamka", waxay noqon laheyd mid yar si loo yareeyo baahida laga qabo kuwa ka soo horjeeda. Sababtoo ah nidaam (cutub halis ah oo ficiladiisu ay isku xirnaadaan sida ujeedadu tahay), ma aha oo kaliya jilayaasha abuura oo kaliya. Badanaa waa hay'adaha iyo qawaaniinta u sharaxan. Isbeddelka ragga oo aan saameyn ku yeelanin hay'adaha awoodda ayaa halis u ah inay ku sii nagaadaan seefta biyaha, taas oo aan saameyn dhab ah u lahayn hawlaha Gobolka. Sidaa darteed baahida loo qabo in la baddalo shuruucda ciyaarta iyo dhisida qaybin cusub oo awood ah, iyada oo la waafajinayo rabitaanka Aljeeriya.
2018, Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka ayaa xaqiijiyay isbeddel horay loo sameeyey tan iyo bilawgii sanadka 2000: tirada dadka Aljeeriyaanka ah ayaa sii yaraanaya. Sidaas darteed, 54% dadka Aljeeriya waxay leeyihiin wax ka yar sanado 30. Si kastaba ha ahaatee, Aljeeriya ayaa sii wadi doonta in lagu maamulo Dastuur lagu qorayo ... 1962, taariikhda madaxbannaanida.
Miyuu falsafadda dastuurka dastuurku la mid yahay Algeria's 2019, dhallinyaro, oo xor ah oo ka walwalsan in ay iska xor ka noqdaan xukunkii Bouteflika?
Inkasta oo waddanku uu shardi ka dhigayo taariikhda asaasiga ah si uu u dejiyo sharcigeeda, haddana xoojinta weyn ee mustaqbalka waxay keeni kartaa in la joojiyo. Marka la eego tusaale ahaan, horudhaca Dastuurka Aljeeriya waa inuu hagaajiyaa. Boggiisa koowaad, midkani waxa uu ka hadlayaa dhinacyo badan oo la xiriira Dagaalka xoraynta qaranka, ka dibna ammaanay muddo dheer Ciidanka Qaranka.
Si kastaba ha noqotee, gogoldhigga ayaa u muuqda inuu kaalin muhiim ah ka ciyaari karo fasiraadda Dastuurka muddo waqti ah. Guud ahaan, waxay bixisaa falsafada guud ee qoraalka iyo waxa ku jira waxa muhiim u ah qorayaasha sharciga aasaasiga ah. Miyuu falsafadani ku xiran yahay Algeria 2019, dhallinyaro, xor ah oo walwalsan in ay ka madax bannaanaadaan harqoodka Bouteflika?
Diidmada "Boqortooyada Jamhuuriga"
Beyond falsafada guud ee qoraalka, Dastuurka 1962 laga bedelay dhowr jeer - isbedelka la soo dhaafay shukaansi dib ugu 2016 - siiyaa awood ku dhawaad ​​buuxda Madaxweynaha, in dhibic ka mid ah samaynta a "Boqortooyada Jamhuuriga" . Xaqiiqdii, isagu wuxuu mas'uul ka yahay Difaaca Qaranka, wuxuu xaq u leeyahay cafis ama amarka xukunka, wuxuu magacaabaa oo joojiyaa waajibaadka ra'iisul-wasaaraha, wuxuu magacaabayaa Madaxweynaha Maxkamadda Sare, Golaha Qaranka, Golaha Dastuurka, mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha amniga, walis ... Wuxuu leeyahay awood (gaar ah) inuu ku baaqo aftida, wuxuuna go'aansan karaa kala diridda Golaha Qaranka ee Qaranka iyo Golaha Qaranka.
>>> READ - Aljeriya: Abdelkader Bensalah, oo ah badeecad saafi ah "nidaamka" waxqabadka laga bilaabo Bouteflika
Awoodda noocan oo kale ah waxay awood u yeelan kartaa oo keliya halista ururada wanaagsan ee hay'adaha dawlada. In 1748, Montesquieu horeyba loogu soo wargaliyay, ee uu qoray Ruuxa sharciyadaKu saabsan khatarta aaminteen oo dhan awoodaha in hal hay'ad ah, "All lagu lumin lahaa haddii nin la mid ah ama aan isku jidh nahay, dhaqmaa saddexda awoodood: awoodda in la sameeyo sharciyo, in fulinta qaraarkii dadweynaha, iyo in dambiyada garsoorka ama khilaafaadka shakhsiyaadka. Ka hor intaan soo jeedin xal, dhowr marxad dambe ayaa: "Si aan awood u laheyn inuu awood u isticmaalo awoodda, waa lagama maarmaan in arrintan wax laga qabto, awoodu waa inay joojiso awooda. "
Dastuurka ku xiga waa in uu hubiyaa awood qeybinta awoodda u dhaxeysa maamulaha, sharci dejinta iyo garsoorka, si looga fogaado in lagu soo koobo khaladaadka hore.
Wada-xaajood, is-waafajin iyo daahfurnaan
Golaha Deegaanka ayaa ka koobnaan doona wakiillo ka socda dadka masuulka ka ah qorida sharci cusub oo aasaasi ah. Marka la barbardhigo howlgalladan, waxay magacaabi kartaa madaxweyne kumeel gaar ah oo magacaabaya dawlad ku meel gaar ah, si loo xaqiijiyo joogtaynta gobolka, wakhtiga uu ku dhammeeyo shaqadiisa.
Dadku waxa ay hogaamin doonaan meesha ugu horeysa si ay u doortaan doorashadooda iyaga oo maraya doorashooyin. Haddii doorashada taasi ma bixiyaan oo dhan damaanado ee matalaad dhab ah rabitaanka dadka, waxa la duniyooyinka karo si loo gaaro ujeedada in. Indeed, dheelitirnaan ka dhiman ugu weyn ee keeni kara in ay shir xad ka wakiil ah dareenka siyaasadeed iyo bulsho ee kala duwan ee dalka. Sidoo kale, mid ka mid ah qiyaasi karnaa in tiro ka mid ah kuraasta Golaha mustaqbalka Dastuurka loo qaybinayaa by bakhtiyaa, fasallada in aadan haysan hab ay u dhigtaan ama ku guuleysto kuraasta at doorashada soo socota.
Waaxda TV-ga ee la abuuro si loo xaqiijiyo helitaanka xogta oo dhan
Marka laga soo tago qaabeynta xubnaha golaha ee mustaqbalka, Dastuurka mustaqbalka waxaa laga rabaa in lagu ansaxiyo aqlabiyad buuxda oo xubnihiisa ka mid ah, si uu u riixo khilaafka ka dhexeeya ciidamada kala duwan. Ugu dambeyntii, qoraalka waxaa loo gudbin doonaa afti dadweyne.
Faa'iidada of samaynta golaha odoyaashuna waa xaqiiqda ah in doodda ay diiradda saari doonaan Dastuurka mashaariicda, nooca taliskii (madaxweynaha, baarlamaanka, isku dhafan) ama gobolka (midaysan, federaalka, maamul baahsan) . Sidaa darteed, dadku mar dambe uma jeedin doonaan, laakiin mashaariicda tamarta ee tobanka sano ee soo socda. Qoraalku wuxuu noqon doonaa mawduuc wadahadal dadweyne, inta lagu jiro marxaladda qoritaanka, kaas oo toosi doona damiirka muwaadiniinta. Waa in kaniisad TV-ga laga dhigaa mid la abuuro si loo hubiyo helitaanka macluumaadka buuxa. Haddii geedi socodkan la raaco, Aljeeriya ayaa markaa ka dib sii wadi doonta mustaqbalka kalsooni.
Cameroon - Dhibaatada Anglophone / Cavaye Yeguié Djibril: "In badan ayaa weli la qabtaa, laakiin tallaabooyin dhowaan waxay soo jeedinayaan in mustaqbalku iftiimayo"